NepalManch :: देउवा समूले गर्‍याे रामचन्द्रलाई अघि सार्ने निर्णय, अब के गर्ला शेखर पक्ष ?
देउवा समूले गर्‍याे रामचन्द्रलाई अघि सार्ने निर्णय, अब के गर्ला शेखर पक्ष ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकाे आगामी पुस २७ गते हुने भनिएको जिल्ला अधिवेशन अब माघमा हुने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले सूचनासहितकाे सर्कुलर जारी गरेअनुसार जिल्ला अधिवेशन अब माघ १५ मा हुने भएको छ।
साेही क्रममा कांग्रेस सिरहाको नेतृत्वका लागि शेरबहादुर देउवा समूहले पुनः रामचन्द्र यादवलाई अघि सार्ने घोषणा गरेको छ । देउवा समूहबाट प्रदेश २ अध्यक्षमा निर्वाचित कृष्ण यादव, केन्द्रीय सदस्यद्वय रमेश रिजाल र दिनेश यादव आइतबार साँझ जिरोमाइलस्थित यादवको घर पुगेरका थिए । उनीहरुले यादवलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।
उनीहरूले आधिकारिक उम्मेदवार यादव नै रहेको भन्दै कसैको भ्रममा नपर्ने नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । योग्य व्यक्तिमात्र उम्मेदवार हुने भन्दै प्रदेश सभापति यादवले केन्द्र र प्रदेशमा जस्तै सिरहामा पनि देउवाको टिमले विजय हासिल गर्ने बताए ।
संस्थापन पक्षले सभापतिका लागि उम्मेदवार घोषणा गरेका यादव वर्तमान सभापतिसहित पूर्वसांसद पनि हुन् । अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनगढीमाई नगरपालिकाबाट मेयर चुनाव लड्ने घोषणा उनले यसअघि नै गरिसकेका छन् । जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै यादवले आफ्नो पूरा प्यानल विजयी हुने दावी गरे। उनले भने, पहिलो पटक ३ सय मतान्तरले विजयी भएको थिए। यसपटक अझ बढी मतले विजयी हुन्छु। पटक पटक स्थगित भएको सिरहाको अधिवेशनको नयाँ मिति माघ १५ लाई तय भएको छ ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्यालय सिरहामा कांग्रेस कार्यकर्ताबीच कुटाकुट भएको थियो । कार्यालय सचिव रामबावु यादव र क्षेत्र नम्बर ३ का सभापति सञ्जय प्रकाश यादवबीच स्थानीय तह निर्वाचनको टिकटको विषयमा भएको विवाद चर्कंदै जाँदा दुवै पक्ष झडपमा उत्रिएका थिए।
प्रदेश २ का ८ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा जिल्ला अधिवेशन हुनसकेको थिएन। त्यसैगरी बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, चितवन र सिन्धुलीमा पनि अधिवेशन हुनसकेको छैन।